Baiboly pejy 656 - Ny Baiboly
Voalohany < 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 Manaraka Farany
Romana toko 14 (tohiny)
16Ary aoka ny soa azonao tsy hampiteny ratsy ny sasany. 17Fa tsy mba ny fihinana amam-pisotro no fanjakan'Andriamanitra, fa ny fahamarinana amam-piadanana, mbamin'ny fifaliana ao amin'ny Fanahy Masina. 18Koa izay manompo ny Kristy amin'izany no ankasitrahan'Andriamanitra, sy ankatoavin'ny olombelona.
19Ny fihavanana sy fifamporisihana ho tsara àry no aoka hokatsahintsika, 20fa aza izay hanina no andravana ny asan'Andriamanitra. Marina fa madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy kosa ny mihinana manafintohina ny sasany. 21Ny tsara, dia tsy mihinan-kena, na misotro divay, na manao na inona na inona izay hahatafintohina, na hahalavo, na hahalemy ny rahalahinao. 22Fa tano ho anao eo anatrehan'Andriamanitra izay itokianao ho marina. Sambatra izay tsy helohin'ny hitsim-pony amin'ny asa ekeny; 23fa izay misalasala dia meloka raha mihinana, satria tsy araka ny hitsim-pony izany, ka ota izay rehetra atao tsy an-kitsim-po.
Romana toko 15
Tokony handefitra amin'ny malemy, toraka ny nataon'ny Kristy - Ny antony nanoratan'i Paoly ho an'ny Romana - Ny niasany tao amin'ny jentily.
1Isika izay matanjaka dia tokony handefitra ny fahalemen'izay osa, fa tsy hanao izay mahafaly ny tenantsika fotsiny. 2Samia mitady izay hahafaly ny namana, amin'izay hahasoa azy, hahatarika azy amin'ny tsara. 3Fa tsy nitady ny hahafaly ny tenany ny Kristy; fa araka ny voasoratra hoe: Ny latsan'izay nandatsa anao dia nihatra tamiko. 4Ary izay rehetra voasoratra taloha dia natao ho fianarantsika, mba hananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fanalana alahelo avy amin'ny Soratra Masina. 5Andriamanitry ny fandeferana sy ny fanalana alahelo anie hampiray hevitra anareo araka an'ny Kristy Jesoa, 6mba hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra Rain'i Jesoa-Kristy Tompontsika, amin'ny fo iray sy vava iray.
7Koa mifandraisa hianareo, tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo mba ho voninahitr'Andriamanitra. 8Fa ny Kristy, dia lazaiko marina, fa natao mpandraharaha ny voafora mba haneho ny fahamarinan'Andriamanitra, amin'ny fanatanterahana ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo; 9ary ny jentily kosa dia mankalaza an'Andriamanitra noho ny famindra-pony, araka ny vosaoratra hoe: Izany no hiderako anao any amin'ny jentily, sy hankalazako ny anaranao. 10Ary koa: Miaraha miravoravo amin'ny olony, ry jentily; 11mbamin'ny hoe: Miderà ny Tompo, hianareo firenena rehetra; ary mankalazà azy, ry vahoaka rehetra. 12Hoy koa Izaia: Hisy solofon'i Jese, izay hitsangana hanapaka ny jentily; izy no hitokian'ny firenena rehetra. 13Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo ny hafaliana amam-piadanana rehetra amin'ny finoana, mba hitomboanareo fanantenana, noho ny herin'ny Fanahy Masina.
14Izaho aloha, ry rahalahy, raha ny aminareo, dia matoky aho fa feno hevitra tsara sy ny fahaizana rehetra hianareo, sady mahay mifananatra koa. 15Nefa nanoratra teny sasany an-kasahiana ho anareo aho, toy ny mampahatsiaro anareo indray, noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy 16mba ho mpandraharahan'ny Kristy Jesoa amin'ny jentily aho, amin'ny fanaovana sorona ny fitoriana ny Evanjelin'Andriamanitra, mba ho fanatitra ankasitrahany ny jentily, rahefa nohamasinin'ny Fanahy Masina.
17Koa mba manana rehareha ao amin'i Kristy Jesoa ihany aho, raha ny momba ny fanompoana an'Andriamanitra. 18Satria tsy ho sahiko lazaina raha zavatra tsy nampanaovin'ny Kristy ahy, mba hampanaiky ny jentily, na tamin'ny teny aman'asa, 19na tamin'ny herim-pamantarana amam-pahagagana, na tamin'ny Fanahy Masina; any ka tongako hatraiza hatraiza ny fitoriana ny Evanjelin'ny Kristy, dia hatrany Jerosalema sy ny manodidina ka hatrany Hiria; 20sady nalaiko ho voninahitra ho ahy ny tsy nitory ny Evanjely afa-tsy tao amin'izay mbola tsy nanononana ny Kristy, mba tsy hanorina amin'izay efa nanoeran'ny sasany, 21fa ho araka ny voasoratra hoe: Ireo tsy nilazana azy dia hahita; ary ireo tsy nandre ny aminy dia hahalala.
22Izany no nahasampona ahy matetika tsy hankany aminareo; 23fa ankehitriny, noho ny tsy fisian'ny zava-misakana ahy intsony amin'ireto fari-tany ireto, 24dia manantena hahita anareo aho, rahefa mandalo ho any Hispania, ka hiara-mipetraka kelikely aminareo, fa rahefa afakafaka ny alaheloko no vao haterinareo any.
25Izao dia ho any Jerosalema aho, hitondra fanampiana ho an'ny olona masina any. 26Fa namory vola an-tsitra-po hiantrana ny olona masina tra-pahoriana any Jerosalema, ry zareo ao Masedonia sy ao Akaia. 27Sitrany tokoa ny nanao izany, fa ananan'ny any trosa izy ireo. Satria nahazo anjara tamin'ny harem-panahiny izy jentily, ka tsy maintsy mba manampy azy amin'ny haren'ny nofo kosa. 28Raha vao vitako io raharaha io, ka voapetraka eo am-pelatànan'izy ireo izany vokatra izany, dia hiainga aho any Hispania aho ka hihazo any aminareo. 29Ary fantatro fa hiara-tonga amiko any aminareo koa ny hafenoan'ny tso-dranon'ny Kristy.
30Avy mangataka aminareo, amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny Fanahy aho, ry rahalahy, hiara-miady amiko, amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy, 31mba ho afaka amin'ny tsy mpino any Jerosalema aho, mba hankasitrahan'ny olo-masina any ny fanomezana hatolotro, 32ka ho tonga an-kafaliana any aminareo, raha sitra-pon'Andriamanitra, sy hiala sasatra kely eo afovoanareo. 33Ho aminareo rehetra anie Andriamanitry ny fiadanana. Amena.
Romana toko 16
Ataony tsara laza Febe, anabavy - Veloma madinidinika - Fanalavirana ny mpampisara-tsaina - Famapanaovam-beloma - Famaranan-teny.
1Indro Febe anabavintsika, lazaiko tsara aminareo, fa mpikarakara ny Eglizy ao Senkrea, 2mba handraisanareo azy tsara ao amin'ny Tompo, araka ny mendrika ny olo-masina, sy hanampianareo azy amin'izay rehetra ilàny anareo, araka ny nanampiany olona maro, hatramin'ny tenako aza.
3Veloma any amin'i Priska sy Akilasy mpiara-miasa amiko ao amin'i Jesoa-Kristy; 4nanao vy very hamonjy ny aiko izy mivady ireo, ka tsy izaho irery no misaotra azy, fa ny Eglizy rehetra any amin'ny jentily koa, 5ary veloma any amin'ny Eglizy rehetra izay ao an-tranony. Veloma any amin'i Epeneto malalako, izay santatr'i Asia ho an'ny Kristy. 6Veloma any amin'i Maria, izay niasa mafy ho anareo. 7Veloma any amin'i Androniky sy Joniasa havako sy niara-nifatotra tamiko, izay sady tsara laza amin'ny Apostoly no tao amin'ny Kristy talohako aza. 8Veloma any amin'i Anfiasa, malalako ao amin'ny Tompo. 9Veloma any amin'i Orbano, mpiara-miasa amintsika ao amin'ny Kristy, sy Stakisa malalako.
Pejy: Voalohany < 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2958 seconds